Shacabka Muqdisho oo walaac xoogan ka muujiyay madaafiic joogto ah. – Radio Daljir
Muqdisho,Jan 08 -Qaar ka mid ah shacabka ka barakacay deegaanada Muqdisho oo ay inta badan ka dhacaan iska horimaadyada u dhaxeeya dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa walaac xoogan ka muujiyay dilal loo gaystay qaar kamid ah eheladooda oo kamid dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Muqdisho.
C/rashiid Maxamuud Cadaani oo ah gudoomiyaha kaamka Colaad ee magaalada Muqdisho ayaa Radio Daljir u sheegay in barakacayaashaa ay soo foodsaareen dilal iyo duqeymo habow ah oo ugu imaanaya goobaha ay uga noolyihiin magaalada Muqdisho.
C/rashiid Maxamuud Cadaani waxaa uu sheegay in waqtigan ay ku jiraan Cusbitaalada magaalada qaar kamid ah dadka barakacayaasha,kuwaas oo ay soo food saareen dhaawacyo kasoo gaaray xabado lagu furay iyo duqeymo hoygooda ugu yimid.
Waxaa jirta in dadka barakayaasha ee ku jira Cusbitaalada Muqdisho aysan awoodin inay iska dhiibaan lacagaha ay dalbadaan saraakiisha caafimaadka madaama aysan jirin cusbitaalo dawladdu gacanta ku hayso lagana helo daawooyin lacag la’aan ah.
Qaar kamid ah dadka Barakacayaasha ee ku jira Cusbitaalada Muqdisho ayaa markii ay bixin waayeen lacagihii loogu samayn lahaa qaliin caafimaad ayaa waxaa soo wajahday in xaaladooda waxba laga qaban islamarkaana ay la ildranyihiin caafimaadkooda.
C/rashiid Maxamuud Cadaani waxaa uu ku amaanay doorka dawladda KMG ah ay ka qaadatay soo qabashada dadkii gaystay qaar kamid ah dadkii dilalka ka gaystay xeryaha barakacayaasha ee Muqdisho.